काठमाडौँ महानगरपालिकाको कामबाट प्रधानमन्त्री पनि खुशी हुनुहुन्छ – Maitri News
काठमाडौँ महानगरपालिकाको कामबाट प्रधानमन्त्री पनि खुशी हुनुहुन्छ
Mohan Bastola December 2, 2018
चुनावी प्रतिवद्धता अनुसार तपाईँको काम कत्तिको अघि बढेको छ ?
अहिले केहीले काठमाडौँ महानगपालिकाले काम नै गरेन भनेर आलोचना गर्ने गरेका छन् । त्यो नबुझेर गरेको आलोचना हो । म मेयर निर्वाचित भएर आएपछि कामले गति लिएको छ । अझ भन्ने हो भने हामीले चुनावका बेलामा घोषणा गरेका सय दिनमा गर्ने १०१ काममध्ये लगभग ८५ प्रतिशत सुरु गरिसकेका छौँ । त्यसमध्ये कुनै नियमित काम छन्, जो एकचोटी सकिँदैनन् । जस्तो, काठमाडौं सफा राख्ने काम । फोहोर उत्पादन पनि भइरहन्छ, त्यसको व्यवस्थापन पनि भइरहन्छ । धेरैजसो वडामा पूर्वाधारका कामहरू सकिन थालिसके । कुनै–कुनै वडामा ६० देखि ८० प्रतिशत काम सम्पन्न गरिसकेका छौँ । मनोरेलको कुरा एकैचोटी बन्ने होइन । त्यसको फिजिबिलिटी अध्ययन गरेर हामी डिपिआर बनाउने चरणमा जाँदै छौँ । हामीले त्यो वेला पार्किङ भवन बनाउँछौँ भनेका थियौँ । यसबारे हामीसँग एकजना पनि इन्जिनियर, विज्ञ छैनन् । महानगरसँग पनि छैन, अन्त पनि छैन । त्यसमा पनि हामीले स्वतन्त्र रूपमा प्रतिपस्र्धा गराउन खोजेका ६ वटा कम्पनीले टेन्डर हालेका छन् । उनीहरूको डकुमेन्ट मूल्यांकन हुँदै छ, केही समय लाग्छ । त्यस्तै, हामीले ब्रुमर ल्याउँछौँ भनेका थियौँ, त्यसका लागि पहिलो बैठकबाटै ५ वटा बु्रमर किन्ने निर्णय गरेका थियौँ । त्यसमा पनि अख्तियारमा मुद्दा पर्यो, अख्तियारले अध्ययनका लागि भनेर फाइल रोकिदियो । कहिले नेपाल सरकारबाट आउने कर्मचारी फेरिए, उसले अध्ययन भनेर रोकिदियो । यस्तै कारणले केही ढिलाइ भएको हो । त्यस्तै, महानगरसहित ३२ वटै वडाका भवन बनाउँछौँ भनेका थियौँ । अधिकांश वडाको भवन बनाउन टेन्डर भइसकेको छ । महानगरको भवन बनाउने विषयमा मुद्दा परेको छ, त्यसैले, रोकिएको छ । त्यो निर्णय हुने वित्तिकै हामी काम अघि बढाउँछौँ । म मेयर निर्वाचित भएर आउँदा अस्तव्यस्त र ध्वस्त महानगर थियो । त्यसलाई हामीले व्यवस्थित सहरमा परिणत गरेका छौँ । म दावाका साथ भन्न सक्छु । कांग्रेसको सरकार हुँदा भएका कामभन्दा अहिले छोटो अवधिमा हामीले धेरै काम गरिसकेका छौँ ।
विद्यासुन्दर शाक्य, मेयर, काठमाडौँ महानगरपालिका
तर, काठमाडौँ प्रवेश गर्ने वित्तिकै देख्ने भनेको त महानगर नै हो । त्यसैले तपाईँप्रति बढी अपेक्षा हुनु पनि त अस्वाभाविक नहोला नि ?
हो, हामीसँग बढी अपेक्षा हुनु अस्वाभाविक होइन । तर, केहीकेही मान्छेले नबुझेर पनि आलोचना गर्छन् । पहिलोपटक काठमाडौं प्रवेश गर्नेले थानकोटमा धुलो उडेको देखेपछि काठमाडौंका मेयरलाई गाली गर्छ । पूर्व जोरपाटीतिर बाटो बिग्रिएको देखेपछि पनि मलाई नै गाली गर्छन् । ती ठाउँमा अर्कै मेयर छन् भनेर पनि उनीहरूले बुझेका छैनन् । त्यसले पनि समस्या भएको छ । अहिले भन्ने हो भने काठमाडौँ महानगरपालिका सबैको अविभावक स्थानीय तह हो । हामीले बनाएका ऐन कानुन अन्य स्थानीय सरकारहरूले पनि नक्कल गरेर बनाइरहेका छन् । हामी बनाउँछौँ, अरूले त्यही हेरेर बनाउँछन् । यसकारण हामीले अरू स्थानीय तहको अभिभावकका रूपमा पनि काम गरिरहेका छौँ । हामीले परिपक्व ढंगले काम गरेका छौँ । जनता पनि खुसी छन् । मैले अघि पनि भने, कुनै पनि समस्या आए कि प्रधानमन्त्रीलाई खोज्छन् कि काठमाडौंको मेयरलाई खोज्छन् । मेरो जिम्मेवारी नै बढी भएका कारण कहिलेकाँही मेयरसँग भेट भएन । कुरा गर्न पाइएन भन्ने गुनासा पनि आउने गरेका छन् । ती गुनासालाई पनि विस्तारै हल गर्दै जाने प्रयासमा छु ।
अहिले सबै भन्दा बढी रानीपोखरीको विषयलाई लिएर आलोचना हुने गरेको छ । सत्य के–हो ?
रानीपोखरी पुनर्निर्माण गर्न २ माघ ०७२ मा राष्ट्रपतिबाट शिलान्यास भएको हो । सबै भन्दा पहिला यो कुराको जानकारी हुनुपर्छ । अहिले सबै म आएपछि नै बर्बात भएको हो भन्ने ढंगले पनि आलोचना गर्ने प्रयास भएको छ । यो गलत हो । हामी निर्वाचित भएको ०७४ सालमा हो । ०७२ सालमा सुरु भएको कामलाई मैले निरन्तरता मात्रै दिएको हुँ । त्यो सुरु गर्दा त नेपाली कांग्रेस नै थियो सरकारमा । आफ्नै पार्टीको नेतृत्वको सरकारले सुरु गरेको कार्यक्रमको विरोधमा उपप्रमुख जानुभयो । मैले त्यो योजनामा कुनै चेन्ज गरेको थिएन । ठेकेदार पहिला नै नियुक्त गरिएको थियो, टेन्डर पनि पहिला नै भएको थियो । जुन ‘ड्रोइङ डिजाइन’ थियो त्यसैलाई मैले छिटो छरितो गराउन मात्रै खोजेको हो । म निर्वाचित हुनुअघिको दुई वर्षसम्म रानीपोखरीमा केही काम भएको थिएन । म आइसकेपछि तुरुन्तै काम अगाडि बढाऊँ भनेर लागेको हो । नगरसभाले सर्वसम्मत रूपले र कार्यपालिकाले पनि पटक–पटक निर्णय गरेको थियो रानीपोखरी छिटोछरितो सम्पन्न गराउनू भनेर । महानगर एक्लैले चाहेर केही निर्णय फेरबदल गर्न सक्दैन मैले त्यतिबेला पनि त्यहि भनेको हो । केही विवादपछि पुरातत्व र पुनर्निर्माण प्राधिकरणलाई पनि बोलाएर बैठक बस्यौँ । उहाँहरूको सुझाबअनुसार विज्ञसमूह बन्यो र त्यसकै सिफारिसअनुसार अहिले काम अगाडि बढाएका छौँ । टेन्डर प्रक्रिया अगाडि बढिसकेको छ । टेन्डर डकुमेन्ट स्वीकृत भइसकेपछि काम धमाधम अगाडि बढ्छ ।
त्यो बाहेक अन्य काममा पनि मैले महानगरवासी खुशी हुने काम गरेको छु भन्ने लागेको छ । छोटो अवधिमा त यति धेरै काम भयो, पाँच वर्षमा त उथलपुथल नै हुने गरी काम गर्छन् भन्नेमा जनता ढुक्क छन् ।
फोहोर व्यवस्थापनको विषयको विवाद खास के–हो ?
डम्पिङ साइट सिसडोलको समस्या छ, त्यो हाम्रो होइन । यो कुरा मैले हिजो पनि भनेको थिएँ, अहिले पनि भन्छु । महानगरपालिका लगायत स्थानीय सरकारको काम भनेको घर, सडकबाट फोहोर उठाएर ल्यान्डफिल साइटमा डम्प गर्ने मात्रै हो । ल्यान्डफिल साइट बनाउने जिम्मा नेपाल सरकारको हो । अहिले हामीले उठाएको कुरालाई सरकारले सुधार गरिसक्यो । हामी १८ वटै नगरपालिका एकै ठाउँमा बसेर उपत्यका नगरपालिका फोरम बनायौँ, त्यसको संयोजक म आफैँ छु । उपत्यकाको मात्रै होइन, धादिङ बजार, नुवाकोट र काभ्रेको फोहोर व्यवस्थापन पनि हामीले गरिरहेका छौँ । नेपाल सरकारले फोहोर व्यवस्थापन गर्न अहिले सिसडोलदेखि बन्चरे डाँडाको बाटो टेन्डर गरिसक्यो । अब विवाद टुंगिसकेको छ । हिजो नेपाल सरकारका केही कर्मचारीले ‘हाम्रो जिम्मा होइन, स्थानीय सरकारलाई जिम्मा दिइसक्यौँ’ भनेर बोलेपछि विवाद आएको हो । अहिले तिनै कर्मचारीले ‘हिजो हामीले गल्ती गर्यौँ’ भनेर स्वीकार गर्दै टेन्डर गरेर काम अगाडि बढिसकेको छ । सिसडोल अस्थायी मात्र हो, त्यहाँबाट बन्चरे डाँडा नै जाने हो । त्यहाँ ल्यान्डफिल साइट बनाउने जिम्मा नेपाल सरकारकै हो । सरकारले त्यहीअनुसार ‘ड्रोइङ डिजाइन’ गरिरहेको छ । काम पनि हुन्छ ।
महानगरभित्रको सवारी जाम अन्त्यका लागि केही पहल गर्नुभएको छ ?
निश्चय पनि हामी त्यसमा निकै चिन्तित भएर लागेका छौँ । हामीले ठूला बस ल्याउन खोजिरहेका छौँ । साझासँग सहकार्य गरेर सहज रूपमा यात्रा गर्ने वातावरण बनाउन हामीले साझा बसमा लगानी पनि गरेका छौँ । अहिले साझाको सबैभन्दा ठूलो लगानीकर्ता हामी नै हो । २० वटा नयाँ बस आउँदै छन् । त्यसका लागि एलसी खोलेर अर्डर गरिसकेका छौँ । विभिन्न रुटमा सहज रूपमा यात्रा गर्ने वातावरण बनाउँछौँ । यससँगै इलेक्ट्रिक बस ल्याउने सोच पनि बनाएका छौँ । साझाको बस सबै रुटमा चलाउनुपर्यो भनेर हामीकहाँ माग पनि आइरहेको छ । बसको संख्या वृद्धिपछि हामी उहाँहरूको माग पनि सम्बोधन गर्छौँ । साना सवारीसाधनभन्दा ठूला सवारीसाधनलाई विकल्पका रूपमा प्रस्तुत गर्न खोजेका छौँ । सुविधासम्पन्न गाडीबाट सेवा दिने योजनासहित पुराना र साना सवारीसाधनलाई विस्थापित गर्ने हाम्रो योेजना छ ।
केही–केही सञ्चारमाध्ययमले तपाईँलाई प्रधानमन्त्रीले नै बोलाएर काम भएन भनेर थर्काउनुभयो भनेर पनि लेखे । यो सत्य हो त ?
मलाई अहिलेसम्म प्रधानमन्त्रीले बोलाएर गाली गर्नुभएको छैन । बरु, एकपटक प्रधानमन्त्रीकी धर्मपत्नीले नै ‘मिडियाले किन त्यस्तो लेख्छ, प्रधानमन्त्रीले कहिल्यै गाली गरेको छैन’ भनेर बोल्नु भएको छ । अझ तपाईंले सुन्नुभएको होला, अस्ति सामाजिक सुरक्षा योजना घोषणाको कार्यक्रममा प्रधानमन्त्रीले महानगरले गरेको कामको बारेमा केही बोल्नुभएको छ । ‘राम्रो काम गरिरहेको छ, सबैले साथ दिनुपर्छ, यसलाई निरन्तरता दिनुपर्छ,’ भनेर उहाँले भन्नुभएको छ । हामीले मोनोरेलको प्रोजेक्टमा काम थाल्यौँ, उहाँले संसद्मा बोल्नुभएको छ । यस्तो हुँदाहुँदै कसले काल्पनिक रूपमा यस्तो हल्ला चलाउँछ ? देशभित्र र बाहिर रहेका नेपालीलाई भ्रम छर्ने गरी किन हल्ला चलाइएको छ ? किन यस्तो लेखे ? एकजना मिडियाकर्मीले त्यसो नगरिदिए हुन्थ्यो भन्ने मेरो सुझाब पनि छ । प्रधानमन्त्रीले मात्रै होइन, कुनै पनि नेताले मलाई त्यस्तो गुनासो गरेको जानकारी छैन ।
तपाईँकै कारण पार्टी कमजोर भयो भन्ने पनि समाचार आउने गरेका छन् । त्यो हो ?
म निर्वाचित भइसकेपछि प्रदेश सभा र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन भयो । काठमाडौं महानगरपालिकामा हामीले काम गरेकै कारण ती निर्वाचनमा पार्टीले राम्रो परिणाम ल्याएको हो । परिणाम राम्रो आइसकेपछि विपक्षीहरू आत्तिएर मेयरलाई बदनाम गराउन सकिए पार्टीलाई ओझेलमा पार्न सकिन्छ कि भनेर मेराविरुद्ध दुष्प्रचार गरिएको हो । मैले नराम्रो काम गरेको भए, काम नगरेको भए प्रतिनिधिसभा र प्रदेश सभामा पार्टी हाथ्र्यो नि । पार्टीले त अत्यधिक बहुमतका साथ जित्यो । अझ गठबन्धनका दुवै पार्टीको चुनाव चिह्न पनि एउटै भएको भए १० मा १० र २० मा २० सिट नै हामी ल्याउँथ्यौँ । यसकारण महानगरवासीले हाम्रो राम्रो मूल्यांकन गरेका छन् । यसमा दुई मत छैन । यी आरोपप्रति कुनै सत्यता छैन ।
Previous Previous post: साना लगानीका मिडियाको हकहित तथा प्रवद्र्धनमा सरकार गम्भीर छः मन्त्री लालबाबु
Next Next post: लिग लिडर म्यान्चेस्टर सिटीको सहज जित